May 2020 – Shwe Yaung Lan
[ September 18, 2020 ] ချစ်စရာ သမီးလေးကို အိမ်ခေါ်ပြီး အပြီးတိုင်မွေးစား ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းရင်းကို ပြောပြလာတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ	Celebrity
[ September 16, 2020 ] ဆံပင်အကြောင်းတင်လိုက်တဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေကို ကြည့်ပြီး နို့ပြချငိတာလားလို့ ပြောကြတဲ့အပေါ် ပြင်းထန်စွာတုံ့ပြန်လာခဲ့တဲ့ ခင်သဇင်	Celebrity
[ September 16, 2020 ] လမ်းတွေကို ပိတ်ဆို့ထားတာဟာ ကိုဗစ် ၁၉ ကိုကာကွယ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြတ်ပြတ်သားသားဝေဖန်ထောက်ပြလာတဲ့ ဖိုးချစ်	Celebrity
[ September 15, 2020 ] မူးယစ်ဆေးဝါး ဖြတ်တုန်းက အကြီးအကျယ် ဒုက္ခရောက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းတွေကို ပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင်ရဲတိုက်	Celebrity
[ September 15, 2020 ] ဆယ်တန်းစာမေးပွဲ ကျရှုံးခဲ့တဲ့ ညီမဖြစ်သူ စိမ်းလဲ့ရတနာ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သူ့ရဲ့ အမြင်ကို ပြောပြလာတဲ့ နေခြည်ဦး	Celebrity
စေတနာကို စော်ကားသွားကြတဲ့ မန္တလေးမြို့မှာ Q ဝင်တဲ့သူတွေရဲ့ လုပ်ရပ်
ယခု သတင်းကို ( Ye Linn Kyaw ) စာမျက်နှာ မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် စေတနာကို စော်ကားသွားသူများ Qurentine ၀င်တဲ့သူတွေကို အား/ကာ သိပ္ပံ(မန္တလေး) ကျောင်း အမျိုးသား အိပ်ဆောင်တွေမှာထားတယ်။ တစ်ဆောင်ချင်းစီက အိပ်ဆောင်မှုး(နည်းပြ)၊ နေတဲ့ အခန်းတွေကို သော့တွေဖျက်တယ်။ luggage အိတ်တွေကိုဖွင့် စာရွက်စာတမ်းတွေမွှေ၊ အကျီ င်္ဖိနပ်အကုန်ယူတယ်၊ ဂစ်တာတွေရိုက်ချိုးသွားတယ်။ စည်းမရှိကမ်းမရှိနဲ့ […]
မြန်မာငွေ ၁၄၁၈၁၄၀၀၀၀၀ ကျပ် တန်ဖိုးရှိတဲ့ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြားများ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဥ်
ယခု သတင်းကို ( Ba Ngyar Ye Yint ) စာမျက်နှာ မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် မောင်တောမြို့ မကညင်တန်းကျေးရွာ နေ ဂျူဟာဟူဆိန်း(ဘ)ရှနာများ(၆၅)နှစ်၊ ရေခါယာဒ်ဖာတေမာ(ဘ)မာမူရော်ရှိမ်း (၂၅)နှစ်တို့ထံမှ ယနေ့(၃၀-၅-၂၀၂၀)နေ့၊နေ့လည်(၁)နာရီခန့် စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား ၇၀၉၀၇၀၀ပြား ကာလတန်ဖိုး ၁၄၁၈၁၄၀၀၀၀၀ ကျပ် ဖမ်းဆီးရရှိ ကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ Credit > Ba Ngyar Ye […]
ယခု သတင်းသည် နေ့စဥ်သတင်းနှင့်သုတရသအဖြာဖြာ Page မှ ရေးသားထားသော သတင်း ဖြစ်သည်။ ခေတ်သစ်ဒီဇိုင်းများ နှင့်ထူးခြားသောဗိသုကာလက်ရာ များဖြင့် တည်ထားသောတောင်ထိပ်‌ပေါ် ဘုရားကျောင်းဆောင်လေးဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ သာမန်ထက်ပိုပြီး တရားအားထုတ် ဖို့အတွက် နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ဘက် Tambon Khaem Son ဒေသ အလယ်ပိုင်းတွင်ရှိသော Wat Pha Sorn Kaewဗိမာန် သည်ဘုန်းတော်ကြီးများ နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာတရားအားထုတ်သူများ အတွက်ဓမ္မ ဆိတ်ငြိမ်ရာနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ တရားဟောပြောရန်အတွက် ခန်းမ […]
ဘူတာနားမှာ တယောက်တည်း အိပ်နေ တဲ့ အမေကြီးကို နိုးပြီး မေးမြန်းကြည့်လိုက်တဲ့ အခါ….
ယခု သတင်းကို ( ONE TO ONE ) စာမျက်နှာ မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် အမရပူရ ပိန်းတန်း ဘူတာနားမှာတယောက်တည်း အိပ်နေ တဲ့အမေကြီးကို အကူအညီပေးဖို့ နိုးပြီးမေးမြန်းကြည့် လိုက်တော့ အမေကြီးက ကောလင်း ကနေ ရထားမှား စီး လာတာပြောလို့ပြော သားနှစ်ယောက်ရှိတယ်ပြောလို့ပြော နဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းရှာပါဘူး။ ဘိုးဘွားရိပ်သာပို့ ပေးမယ်ဆိုတော့လဲ မနေချင်ဘူးတဲ့ လောလောဆယ်ကူ […]
CCTV တပ်ထားမှန်း မသိဘဲ ဆိုင်ရှင်အလစ်မှာ စားစရာတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ခိုးယူနေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ ဗီဒီယို
ယခု သတင်းသည် နေ့စဥ်သတင်းနှင့်သုတရသအဖြာဖြာ Page မှ ရေးသားထားသော သတင်း ဖြစ်သည်။ အခု ကိုဗစ်ကာလ မှာ အလုပ်အကိုင် စီးပွားရေး မပြေလည်မှုတွေကတော့ လူအများစု ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…. အထူးသဖြင့် အခြေခံ လူတန်းစားတွေ အပေါ်မှာ ပိုပြီးသက်ရောက်မှု ရှိတယ်လို့ပြောရင်လည်း မမှားပါဘူး.. အဲ့ဒါကြောင့်လည်း တစ်နေ့နဲ့တစ်နေ့ ခိုးမှု လုယက်မှုတွေ ပိုများလာ တယ်လို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ် အခု အွန်လိုင်းမှာ ပျံ့နှံ့လာတဲ့ […]
ဒီနေ့ည ၈ နာရီအချိန် ကိုဗစ်၁၉ လူနာအသစ် တွေ့ရှိမှု စာရင်းကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာ
ယခု သတင်းကို ( MOHS ) စာမျက်နှာ မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၂၉-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ၁။ (၂၉-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့အတွက် COVID-19 ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် – အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) မှ (ပထမအသုတ်) အဖြစ် ဓာတ်ခွဲနမူနာ(၄၆၉)ခုနှင့် အမှတ် (၁) […]
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မြေပေါ်မှာ တစ်ပင် ၅ ဒေါ်လာပေးပြီး သစ်ပင်စိုက်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေ
ယခု သတင်းကို ( Aung Myint Thaung Yeu ) စာမျက်နှာ မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မြေပေါ်မှာ တစ်ပင် ၅ ဒေါ်လာပေးပြီး သစ်ပင်စိုက်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေ ဖြစ်ပါတယ်… သူတို့က စိုက်ပြီး ပြန်သွားတာ။ ဘာတောင်းဆိုမှုမှ မရှိ။ ဘာ ရလိုမှုမှ မပါ ပါဘူး… လူသားဆန်ခြင်းကို ဒီမြေပေါ်မှာ စိုက်ပျိုးခဲ့ရုံ […]
အမွှာညီအစ်မ နှစ်ဦး မှ ကျန်ရှိနေတဲ့ တစ်ဦးကို ရှာဖွေမှု ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
ယခု သတင်းကို ( အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ စစ်ကိုင်း ) စာမျက်နှာ မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် အမွှာနှစ်ယောက်မှ ကျန်ရှိသောရုပ်အလောင်းအားရှာဖွေမှုရပ်နား လိုက်ပါပြီ (24.5.2020) ရပ်နေ့က စစ်ကိုင်းတံတားအဟောင်း ပေါ်မှ ခုန်ချသွားသော အမွှာညီမ နှစ်ယောက်အား SERT ရေပြင်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ မှ ဧရာဝတီမြစ် အတွင်း ရှာဖွေခဲ့ရာ (26.5.2020 )ရက်နေ့တွင် ညီမဖြစ်သူ၏ ရုပ်အလောင်းအား တံငါသည်များ၏ သတင်းပေးမှုဖြင့် […]
အရမ်းချစ်ရတဲ့ “မ” အတွက် စာတစ်စောင်ရေးပြီး ကြိုးဆွဲချ သတ်သေ သွားတဲ့ လားရှိုးမြို့က လူငယ်တစ်ဦး
ယခု သတင်းကို ( လားရှိုးလူငယ်များလူမှုကူညီရေးအသင်း ) စာမျက်နှာ မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် လားရှိုးမြို့ရပ်ကွက် ၁၂ ရှိ ပိတောက်ပင်ပေါ်၌ အမျိုးသားတစ်ဦး ဆွဲကြိုးချသေဆုံး ခဲ့ပါတယ် (လားရှိုး မေ ၂၉) မေ ၂၉ ရက်နေ့ နံနက် ၆ ကျော်ခန့်ချိန် လားရှိုးမြို့ ရပ်ကွက်(၁၂)၊နယ်မြ(၅)၊နယ်စည်းမထားဆရာဝန်များရုံးအရှေ့၊ပိတောက်ပင်ပေါ်တွင် အမျိုးသားတစ်ဦးဆွဲကြိုးချ သေဆုံးလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရသည် သေဆုံးသူမှာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တစ်ခုမှ လက်ဖက်ရည် […]
ဒီရက်ပိုင်း ပရစ်ကြော်ဝယ်စားတဲ့သူများ အထူးသတိပြုကြပါ၊ အသက်ရှူတွေကြပ် အသက်ရှူမဝဖြစ်ပြီ….း
ယခု သတင်းကို ( Oo Htet Gyi ) စာမျက်နှာ မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် မွေးကတည်း ပုရစ်ကြော် စားလာ တာ အသေကြိုက်တာ ဘာမှမဖြစ်ဘူး ( အခါပုရစ် မဟုတ် ) ခုကြမှ ဘယ်လို မတည့်တယ်မသိ မျက်နှာတွေယောင် ပီးမျက်လုံးတွေ နှစ် ဖက်လုံး ပိတ်ကုန် တယ်… ပြီးတော့ အသက်ရှူတွေကြပ် […]